घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू पोर्तुगाली फुटबल खेलाडीहरू Fabio Silva बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
हाम्रो फेबियो सिल्भा जीवनीले तपाईंलाई उनको बाल्यावस्थाको कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका, कार, नेट वर्थ र जीवनशैलीको बारेमा तथ्यहरू बताउँछ।
संक्षेपमा, यो फुटबल प्रतिभाको जीवनमा हुने घटनाहरूको विस्तृत विवरण हो जुन उहाँ बाल्यकालको दिनदेखि शुरू गर्नुभयो, जब उहाँ लोकप्रिय हुनुभयो। हेर्नुहोस्, प्रारम्भिक जीवन र भविष्यको उदय सीआर rise- एक फोटो प्रगति जुन उसको बायो सारांशमा छ।
हो, सबैलाई थाहा छ Fabio एक तेज र सहज फिनिशर हो जसले प्रशंसकहरूलाई विचार रद्द गर्न बनायो रोनाल्डो बदल्नु असम्भव छ। प्रशंसकको बाबजुद, धेरैले फेबियो सिल्भा बायोग्राफी पढ्न समय लिएका छैनन्। यो नोटमा छ कि हामीसँग यसको जीवनी कथाको पूर्ण तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दतको लागि हामीसँग यो आकर्षक कुरा छ।
Fabio Silva बचपन कहानी:
जीवनी सुरुवातीहरूको लागि, पोर्तुगालीले 'फेबियो डानियल सोरेस सिल्भा' नाम राख्छ। फेबियो सिल्वाको जन्म जुलाई २००२ को १ day तारिख उनको आमा बुबा श्रीमती र श्रीमती जर्ज सिल्भामा भएको थियो, पुर्तगालको पोर्टो मेट्रोपोलिटन क्षेत्रको पूर्वमा। सुन्दर फुटबलर छ जनाको परिवारमा जन्म भएको थियो - त्यो हो, चार छोरा (एक भाइ र दुई बहिनीहरू), जसमा उनको आमा र बुबा पनि छन्।
Fabio सिल्वाको बढ्दो वर्ष:
"अर्को सीआर” "गान्दोमारको उनको जन्मस्थलमा हुर्किएको थियो जसको दाजु जोर्गे जुनियर र दुई बहिनीहरू, ईनेस र लौरा भन्दा कम थियो। ऊसँग उसको बाल्यकालको स्पोर्टी सम्झनाहरू छन्
जुन सबै दिन फुटबल खेल्ने वरिपरि घुम्छ।
Fabio सिल्वा परिवार पृष्ठभूमि:
के तपाईंलाई थाहा छ सोकर खेलाडीको जन्म एक वर्ष पछि उसको बुबाले बोभिस्टालाई २००१ मा प्रिमिरा लीगा जित्न सहयोग गरे? हो, तपाईं त्यो सहि पढ्नुहुन्छ, Fabio का बुबा एक समर्थक फुटबलर थियो। त्यस्तै, उनीहरूको मध्यम-वर्गका परिवार आरामसँग बस्थे र खेलकुदमा उनीहरूको रुचि थियो।
Fabio सिल्वा परिवार उत्पत्ति:
पोर्चुगालीको रूपमा स्ट्राइकरको राष्ट्रियता एक सत्य तथ्य हो। यसका साथै, फ्याबियो सिल्वा परिवारको उत्पत्ति निर्धारण गर्न गरिएको अनुसन्धानले पुष्टि गर्दछ कि उसको जरा पूर्वी पुर्तगालको गण्डोमार नगरपालिकामा पत्ता लागेको छ। यस क्षेत्रका मानिस पुर्तगालका हरेक अन्य क्षेत्र जस्तै पुर्तगाली बोल्छन्।
Fabio सिल्वा क्यारियर कहानी:
यो आश्चर्यजनक थिएन कि फ्याबियोले धेरै क्लब उमेरमा स्थानीय क्लब युनिओसँग प्रशिक्षण शुरू गर्यो। उहाँ गाउँ गाउँ गोन्डोमारमा सम्मिलित हुनुभयो। त्यस समयमा उनका प्रशिक्षक पेड्रो फोनसेकाले याद गरे कि फेबियो युवा फुटबल खेलाडीहरूको दुर्लभ प्रजाति थियो। उनको अनुसार, तत्कालीन फुटबल फुटबलले हराउनुलाई घृणा गर्थ्यो र जब आफैमा सजाय आउँदछ तब प्रायः दण्ड दिईन्थ्यो।
क्यारियर फुटबलमा Fabio Silva प्रारम्भिक वर्ष:
बच्चा आठ वर्षको उमेरमा, ऊ आफ्नो पूर्वानुमानी प्रतिभाको बारेमा ज wild्गली आगोको रूपमा फैलिने खबरको गर्मी सम्भावना थियो। फ्याबियोको सफलताले पोर्तोलाई सचेत गरायो जसले उसलाई लुक्नको लागि समय खर्च गरेन। कडा प्रतिस्पर्धाको खोजीमा उनले बेनफिका सरेका देख्नु भन्दा पहिले उनले years बर्ष ड्र्यागससँग बिताए।
फेबियो सिल्वा रोड फेम कथा:
बेन्फीकासँग उनको २ बर्षो उमेरको शिखरमा, तत्कालीन १ year वर्षीय उमेर पहिले नै म्यानचेस्टर सिटी र लिभरपूलबाट चासो लिन थालिसकेका थिए। Fabio प्रिमियर लिग पक्ष मध्ये कुनै एक मा स्विच गर्न उत्सुक थियो भन्ने महसुस गरेर, आफ्नो बालपण क्लब पोर्तो आफ्नो उत्पादन फिर्ता पाउन को लागी एक हताश अभियान शुरू गर्नुभयो।
वास्तवमा यस क्लबका पूर्व एकेडेमी प्रबन्धक जोसे तावरेसले एल्गारवेमा छुट्टी मनाउँदै किशोर किशोरीको फिर्ताको खोजीमा फेबियो सिल्भा परिवारलाई भेट्न लामो यात्रा गरे।
Fabio सिल्वा बायो - ख्याति कथा उठ्नु:
उज्जवल भविष्यको आश्वासनसहित, फ्याबियो पोर्टो फर्के र उनले छोडेको ठाउँबाट उठ्यो। २०१ of को गर्मीमा, उसले पहिले नै तुलना already पटक ब्यालोन डोअर विजेताको लागि चित्रण गरिरहेको थियो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उनले पोर्तो यू १ s को लागि appea appea पटक in appea पटकमा oring 33 पटक गोल गरेर आफ्नो मूल्यवान्करणलाई मजबूत पारिदिए र प्रिमिरा लीगाको गिल भिसेन्टेमा २-१ ले पराजित गरेको पोर्टोको लागि उनले पदार्पण गरे।
डेब्यू र त्यसपछिको उपस्थितिको साथ, फ्याबियोले आफ्नो युवा उमेरसँग सम्बन्धित धेरै रेकर्डहरू सेट गरे। जब देखि Fabio सामिल छ Nuno Espírito सान्तोको वोल्वरहेम्प्टन, उनका प्रशंसकहरू उनीहरूको उत्साह रोक्न सक्दैनन्।
उनीहरूलाई उनको ट्र्याक रेकर्ड थाहा छ र उज्जवल भविष्यको प्रतिक्षा गर्दै उसको पुर्तगाली भाइहरू सँगसँगै। पेड्रो नेटो। र Diogo Jota आदि। जुनसुकै तरिकाले पोर्चुगिजहरूका लागि चीजहरू बाहिर आउँछन्, बाँकीहरू, जस्तो उनीहरू भन्छन, इतिहास हुनेछ।
Fabio सिल्वाको प्रेमिका को हो?
१ 18 बर्षको उमेरमा, पेशेवर फुटबलमा स्ट्राइकरको यात्रा एक महत्वपूर्ण गति सुरू गर्दैछ। एक दशक भन्दा बढि उनको क्यारियर आकार दिन उनीसँग उसको जीवन छ।
तसर्थ, Fabio सिल्वाको प्रेमिका को बारे मा जानकारी आउन गाह्रो छ किनभने ऊ कुनै पनि महिलाको साथ भावनात्मक रूपमा अल्झिनमा छिटो छैन। यो Fabio सिल्वा प्रेमिका शीर्षक शीर्षक पहिले एक समय लिन्छ।
Fabio सिल्वा पारिवारिक जीवन:
राम्रो घर जीवन र फुटबल प्रतिभा को वृद्धि को लागी महत्वपूर्ण छ, र स्ट्राइकर एक अपवाद छैन। हामी तपाईं Fabio सिल्वा आमा बुबा र भाई बहिनीहरू को बारे मा तथ्य ल्याउन। थप रूपमा, तिनका आफन्तहरूसँग सम्बन्धित तथ्यहरू यस भागमा खाली राखिन्छ।
Fabio सिल्वा बुबा को बारे मा:
लुस जर्ज पिन्टो दा सिल्भा स्ट्राइकको बुबा हो। एक समय पेशेवर फुटबलरको रूपमा, उसले धेरै पुर्तगाली क्लबको सफलतामा योगदान पुर्‍यायो। लुस जर्ज पिन्टो दा सिल्भासँग उनको नाममा दुई अन्तर्राष्ट्रिय क्याप्स छन्।
यद्यपि पूर्व डिफेन्सि mid मिडफिल्डरले २०११ मा उनको जुत्ता बुलाए। प्रशंसकहरूले उनीलाई २००१ मा बोविस्टालाई प्रिमिरा लीगा जित्न मद्दत गरेकोमा याद छ। जोर्गेको परिवारसँग, विशेष गरी उनका छोराहरू जो उनी पछि फुटबल खेल्छन्।
फेबियो सिल्वाकी आमाको बारेमा:
ठूला आमाले ठूला छोराहरू जन्माइन् र उनी एक अपवाद होइनन्। यद्यपि फ्याबियो सिल्भाकी आमा परिवारमा सबैभन्दा कम चिनिएको देखिन्छ। यसको बाबजुद पनि, सोकर प्रतिभा र उनका भाइबहिनीहरू हुर्काउन उनको योगदान प्रशंसनीय छ। यस स्ट्राइकरले अझै उनीको बारेमा कुरा गर्ने छ तर उनको भलोको चासो हृदयमा छ।
Fabio सिल्भाका भाइबहिनीहरूको बारेमा:
यस स्ट्राइकरका तीन बहिनीहरू र एक भाइ छन्। हामीले दुई बहिनीहरूलाई Ines र Laura को रूपमा पहिचान गरेका छौं। आफ्नो तर्फबाट, फ्याबियोको भाइ जोर्ज सेन्ट पनि एक फुटबलर हो जसले आफ्नो व्यापार लाजीओसँग गर्दछ।
फ्याबियो सिल्भाका अभिभावकहरूले यो कुरा सुनिश्चित गरे कि बेनफिकामा उनीहरूको छुट्टै बाटो नपुगुञ्जेल जेठो भाई र स्ट्राइकर एकै क्लबमा फुटबलमा उनीहरूको विकास भयो। जर्जको क्यारियर अहिले सम्म कम प्रख्यात छ। जे होस्, ऊ खेलमा उनको कान्छो भाइको कारनाममा गर्व छ।
फेबियो सिल्भाका आफन्तहरूका बारे:
फ्याबियो सिल्भाको नजिकको परिवारबाट अघि बढ्दै, स्पष्ट पार्नु पहिले पहिलो कुरा यो हो कि उहाँ सम्बन्धित हुनुहुन्न। आंद्रे सिल्वा। त्यहाँ स्ट्राइकरको पारिवारिक जरा वा पुर्खाको कुनै रेकर्ड छैन, विशेष गरी उसको हजुरबा हजुरआमाको। त्यस्तै, उनका काका, काकी, काका, भाईबहिनी र भतिजा अझै साइबरस्पेसमा अवस्थित छन्।
Fabio सिल्वा निजी जीवन:
फुटबल बाहिर स्ट्राइकर को हो र खेल बाहिर उनको चरित्र को प्रकृति के हो? सुरु गर्नका लागि, Fabio प्रशिक्षण र प्रतिस्पर्धी खेलहरू बाहिर खुशी खुशी क्षणहरूको मजा लिन्छ।
फ्यानहरू र साथीहरूले उहाँलाई एक नम्र र राम्रो प्रकृति साथीको रूपमा देख्दछन् जो मानिसहरूसँग सम्बन्धित जब हडताल गर्न सही डोरीहरू जान्दछन्। उसको फेसनमा रुचि छ, छुट्टि मनपर्‍छ, भिडियो गेमहरू हेर्न र साथीहरूसँगै ह्या hanging्गआउट गर्न मनपराउँदछ।
Fabio सिल्वा जीवन शैली:
हामी फुटबल खेलाडी को नेटवर्थ को बारे मा कुरा गरौं र कसरी उसले आफ्नो पैसा कमायो। सुरू गर्नका लागि, फ्याबियो सिल्वाको कुल सम्पत्ति अझै पूनरावलोकनमा छ। यद्यपि उसको market १२०० मिटरको बजार मूल्य छ।
Wolverhampton मा उसको ज्याला र तलब संरचना को विवरण अझै स्केची छन्।
यद्यपि उनी नाइकबाट प्रायोजनको आनन्द लिन्छन् र उनीका लागि एन्डोर्समेन्ट्सको एरे छन्। यस स्ट्राइकरले आफ्नो पहिलो ड्राइभिंग इजाजतपत्र प्राप्त नगरेको हुन सक्छ, तर त्यहाँ उनले विदेशी कारहरू वहन गर्न सक्ने तथ्यलाई इन्कार गर्ने कुनै कुरा छैन। न त महँगो घरहरू / अपार्टमेन्टहरूमा बस्न उसको बाटोमा अवरोधहरू छन्।
Fabio सिल्वा तथ्य:
यस चाखलाग्दो टुक्रालाई समेट्नको लागि, यहाँ स्ट्राइकरको बारेमा थोरै-ज्ञात वा अनटल्ड तथ्यहरू छन्।
तथ्य # 1 - Fabio सिल्वाको धर्म:
Fabio अन्तर्वार्ताको दौरान आफ्नो व्यक्तिगत जीवन - धर्म सहित - को विवरण मा खुला छैन। यद्यपि, यस्तो अनौठो कुरा उसको बहिनीको नाम जस्तै इसाई भएको पक्षमा छ - लौरा - सुझाव दिन्छ।
फिफा # २ - २०२० रेटिंग:
जब फिफा २०२० रेटिंग्सको कुरा आउँछ, संख्या स्ट्राइकरको लागि राखिन्छ - त्यो सँगी पुर्तगाली भन्दा फरक (Florentino लुइस) - उहाँको वास्तविक क्षमता प्रतिबिम्बित छैन। हो, फ्यानहरू बुझ्दछन् कि उसले केवल पहिलो-टीम फुटबलमा बच्चा चरणहरू लिएको छ। धेरैले सोच्दछन् कि 70 86 को सम्भावितताको साथ score० को समग्र अ his्क उसको क्षमताको बेमेल हो।
तथ्य #3- फुटबल प्रबन्धक वन्डरकिड:
स्ट्राइकर फुटबल प्रबन्धक मा एक लिजेन्ड हो। कुनै श .्का बिना, उसले आउने बर्षहरूमा अविश्वसनीय विशेषताहरू प्राप्त गर्दछ, त्यस्तै कि खेलाडीहरू उसलाई फुटबल प्रबन्धक वन्डरकिडको रूपमा मान्दछन्। ब्वाँसहरू निकट भविष्यमा ती रेटिंगहरू प्राप्त गर्न पाउँदा खुसी हुनेछन्।
Fábio डानियल Soares सिल्वा
जन्म मिति जुलाई २००२ को १ th औं दिन
जन्मस्थान पोर्चुगल मा Gondomar
आमाबाबुले जर्ज सिल्भा
भाई बहिनीहरू जर्ज जूनियर, लौरा, Ines
सोख भ्याकेसन गर्दै, भिडियो खेलहरू हेर्दै र साथीहरूसँग बाहिरै।
उचाइ Fe फीट, १ इनचे
यो Fabio सिल्भा बायो को लागी गर्छ र हामी आशा गर्दछौं कि तपाईंले उसको जीवन कहानीबाट केहि सिक्नु भएको छ। निस्सन्देह, यो बचपन कहानी हामीलाई Fabio जस्तै कडा प्रतिस्पर्धा खोजी गर्न प्रेरित गर्छ, जो धेरै क्लबहरुमा चाल मा उनलाई भन्दा अगाडि उमेर समूहहरु मा खेले।
Lifebogger मा, स्थिरता तपाईंको मनपर्ने फुटबलरहरूको बाल्यकाल कथाहरू वितरणमा हाम्रो वाचवर्ड हो। Fabio Silva को जीवनी मा सही जस्तो लाग्दैन कि केहि हेर्नुहोस्, कृपया तलको बक्समा एक टिप्पणी ड्रप गरेर हामीलाई थाहा दिनुहोस्।